warkii.com » Waa Maxay Sababta Loogu Sawiray Yaya Toure Garoonka Tababarka Iyo Maaliyada Kooxda Heerka Afaraad Ee Ingariiska Ee Leyton Orient?
Waa Maxay Sababta Loogu Sawiray Yaya Toure Garoonka Tababarka Iyo Maaliyada Kooxda Heerka Afaraad Ee Ingariiska Ee Leyton Orient?
Yaya Toure ayaa yiri “waan arki doonaa” markii uu ka hadlayay inuu ku biirayo kooxda Leyton Orient ka dib markii uu ka yaabsaday taageerayaasha kooxda heerka afaraad ee Ingariiska isagoo isku dayaya inuu taam noqdo ka hor xilli ciyaareedka 2020-21.
27 jirkaan ayaa bilaa koox ah tan iyo markii uu ka tagay kooxda heerka labaad ee Shiinaha Qingdao Huanghai horaantii sannadkan.
Laakiin halyeeyga Manchester City ayaa u muuqda mid diyaar u ah inuu garoomada ku sii jiro isagoo ku soo labistay maaliyada tababarka ee kooxda Leyton Orient, wuxuuna bilaabay inuu tababar la sameeyo kooxda.
Inkastoo tababarkii maanta uu ahaa mid jirdhis ah, Toure ayaa xaqiijiyay inuu tababar la sii sameyn doono kooxda heerka afaraad ilaa isbuuca danbe taasoo la micno ah inuu la ciyaari doono waqtiga tababarka.
Isagoo ka hadlayay fursada ay kooxda Leyton u siisay inuu tababar la sameeyo, xiddigii hore ee Barcelona ayaa ka mahadceliyay.
Wuxuu u sheegay warbaahinta kooxda: “Tababarha iyo shaqaalaha waxay ahaayeen fantastik, waxay ii ogolaadeen inaan imaado oo aan tababar la sameeyo wiilasha.
“Waa fursad weyn inaan xiddigo kale tababar la sameeyo oo dad kale la kulmo. Ma aheyn wax salhan fayraska dartiis.
“Aad ayaan u faraxsanahay”
Wariyaha wareysnayay Luke Lambourne ayaa soo jeediyay inaysan suurtogal aheyn in Toure uu u saxiixo kooxda heerka afaraad, laakiin xiddiga Ivory Coast ayaa qosol uga jawaabay ka hor inta uusan dhihin:
“Waa laga yabaa, waa ay dhici kartaa.
“Waxaan kaliya doonayaa inaan ku riyaaqo ilaa iyo daqiiqada ugu danbeysa sababtoo ah kubada cagta wax walba ayay ii tahay aniga. Waxaan kubada ka maqnaa afar ama seddex bilood, waxaana ku fekerayay inaan wax tabayo.
“Waxaan dareemayaa inay halkaan tahay sida gurigeyga oo kale, waxaan doonayaa inaan tababare sameeyo oo aan shaqo fiican qabto.
“Malaha waan arki doonaa.”